musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Mahara Endege Matikiti: Ontario kuenda Reno-Tahoe
Vafambi vanogona kunakidzwa nereno mukurumbira pasi rose Reno neLake Tahoe, ikozvino ingori inokurumidza isingamire nendege kubva. Mari dzekusuma dzinowanikwa kusvika muna Mbudzi 15, asi zvirinani, vafambi zana vekutanga kubhuka vanowana mari yemahara!
aha! inofambiswa nemhare yeExpressJet Airlines yave chikamu cheInland Empire/Ontario, Calif. nharaunda nendege yayo yekutanga isingamire kuenda kuReno musi waNovember 4. Ndege yekutanga inotanga aha! sevhisi pakati peReno-Tahoe International Airport neOntario International Airport.
aha! Iri kupa tikiti remahara kune vekutanga zana Ontario-Reno vatengi. Vafambi vanogona kushandisa kodhi yepromo WELCOME100ONT kuti vawane $2 yekubhadhara yekutanga pakufamba kusvika Ndira 0, 15 (inogona kutengwa kusvika 2021:11pm musi waNov. 59, 7, ichiripo. Haishande parwendo kubva 2021-24 Mbudzi. Zvimwe zvinorambidzwa zvinoshanda).
Ndege dzichashanda Chipiri chega chega, China neSvondo dzichibva kuOntario na4 pm dzichisvika paReno-Tahoe na5:28 pm Reno kuenda kuOntario ndege dzinosimuka na1:35 pm dzosvika na3:03 pm.
Ndege dzeawa imwe nemaminetsi makumi maviri nemasere dzinopa vafambi nguva yakawanda vari pasi kuti vashandise zvakanyanya nguva yavo yezororo uye kugona kubatanidza nzendo pfupi dzepakati pesvondo kuti vatore mukana wemitengo yakaderera yevhiki-vhiki yemahotera.